I-LG isungule umgca omtsha wemivalo yesandi ngenkxaso ye-AirPlay 2 | IPhone iindaba
Izolo besikuxelele ngombono wethu wokuqala omtsha ilungu losapho lakwaSonos, uSonos Roam, isithethi esitsha esiphathwayo esivela kwisithethi esikhulu. Ewe ayisiyiyo yonke into eza kuba yi-Sonos, sikwafuna ukufumanisa ukuba zeziphi ezinye iimveliso ezisizisela zona kwaye iindaba zanamhlanje zinxulumene nenye inkampani ezinikele ekwenzeni izithethi. I-LG ihambise uluhlu olutsha lwee-soundbars ukusuka ngo-2021 kwaye bafika benenkxaso (ngandlela thile) ye-AirPlay 2. Qhubeka ufunda ukuba sikunika zonke iinkcukacha.
Baye bakubhengeza ngokhuphiswano lweendaba: Zonke iibha zesandi ze-LG ngo-2021 ziya kuhambelana ne-Apple's AirPlay 2. Ezi ziya kuthi zixhase ifomathi yesandi esingqongileyo I-Dolby Atmos kunye ne-DTS: X., eyona migangatho iphambili ye-hi-fi audio. Into esiyibonayo kwezinye iibrand kwaye efikelela nakwimivalo yesandi yile Ukulinganiswa kwesithethi esekwe kwigumbiOko kukuthi, iya kusebenzisa iimakrofoni ukulungelelanisa isandi nendawo esihlala kuyo. Ukuyikhupha yonke into, iimodeli eziphezulu ziya kuqinisekiswa nge-24-bit / 96kHz ilahleko ye-Hi-Res yeaudio yokudlala kwakhona.
Njengoko usazi, i-AirPlay 2 isivumela imisebenzi emitsha ngokubhekisele kuhlobo lwayo lwangaphambili. Kufuneka kuthiwe le-AirPlay 2 ibikunye nathi ukusukela ngo-2018 kodwa abavelisi baye bacotha ukusebenzisa inkqubo entsha ye-Apple yonxibelelwano. Ivumela ntoni idlalwe 2? siyabolaYenza inkqubo yemculo ye-multiroomOko kukuthi, sinokukhetha izixhobo ze-AirPlay ezininzi ukuze umculo ofanayo udlalwe phakathi kwazo zonke, okanye ngokwahlukileyo. Ibe iintlobo zesithethi ezisungulwe ukuxhasa idlalwe 2, kwaye njengoko sikuxelela, i-AirPlay 2 sele ihambelana noluhlu lwee-2021 zemivalo yesandi. Kwaye wena, Ngaba ucinga ngokufumana ibha yesandi kwinkqubo yakho yemultimedia? Ngaba usebenzisa idlalwe ukudlala umculo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-LG isungule umgca omtsha wee-soundbars ngenkxaso ye-AirPlay 2
Imiceli mngeni mibini ilungele abasebenzisi beApple Watch: Usuku loMhlaba kunye noMhla woMdaniso wamazwe aphesheya